Xuutiyiinta Yemen oo taageeray Soomaaliya - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Xuutiyiinta Yemen oo taageeray Soomaaliya
April 21, 2018 admin636
Kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen ayaa waxa ka hadashay Khilaafka soo gala dhexgalay dalalka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
Kooxdaasi oo si weyn uga soo horjeedda dalalka Sucuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa Ammaan u soo jeedisay dowladda Soomaaliya waxaana ay dowladda Imaaraadka Carabta uga digtay Faragelinta Soomaaliya.
Maxamed Cali Xuuti Madaxa guddiga kacdoonka ee ka tirsan Xuutiyiinta Yemen ayaa sheegay in kooxdan ay taageersantahay Soomaaliya, go’aanka ay qaadatay dowladda Soomaaliya, islamarkaana ay qirsan yihiin Imaaraadka Carabta ay ku xadgudbeen Qaranimadda Soomaaliya.
“Waxaanu taageereynaa walaalaheen Soomaaliya, waxaan cambaareyneynaa faragelinta Imaaraadka ee arrimaha Soomaaliya, waxaan kaloo Imaaraadka u sheegeynaa inay qashinkooda kala fogaadaan dadkaasi xorta ah” ayuu yiri Maxamed Cali Xuuti
Hadalka kasoo baxay Kooxda Xuutiyiinta Yemen waxaa uu ku aaday xilli uu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta.
C/weli Muudey “Dastuurkii saxda ahaa waa la xaday”
War-Murtiyeed: Shirweynaha Dib-u-Hshiisiinta Galmudug
Gudiga doorashooyinka dadban ee galmudug oo soo saaray liiska magacyada musharixiinta iyo beelaha kuraastooda bari loo tartamayo
November 15, 2016 November 15, 2016 Duceysane